Addis Ababa - Oslo: Ny Airlines Etiopiana izao dia in-6 isan-kerinandro
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Addis Ababa - Oslo: Ny Airlines Etiopiana izao dia in-6 isan-kerinandro
Ny Ethiopian Airlines dia hampitombo ny fahita matetika eo anelanelan'ny Addis Ababa sy ny seranam-piaramanidina Avinor Oslo hatramin'ny 11 desambra. Hatao in-enina isan-kerinandro ny zotram-pifandraisana amin'ny fampiasana an'i Boeing 787-8 Dreamliner an'ny Etiopiana.
'Nanangana fiaraha-miasa akaiky amin'ny Ethiopian Airlines izahay, ary niara-niasa tamin'izy ireo mba hahatonga ity làlana ity ho tantaram-pahombiazana. Porofo izany fa niasa tsara ny fiarahamiasa ato aminay, ary nahomby ny Etiopiana tamin'ny fampivoarana ny portfolio -n'ireo mpandeha raharaham-barotra, fialantsasatra ary fialamboly. Ny fizarana ho an'ireo mpandeha mitsidika ny namany sy ny fianakaviany koa dia nalaza tamin'ity lalana ity, ' hoy i Jasper Spruit, filoha lefitry ny fivezivezena ao Avinor.
'Hanome seza 25,000 fanampiny isan-taona eo aminay eo amin'ny tambajotrana lava izahay.' hoy i Jasper Spruit, filoha lefitry ny fivezivezena ao Avinor.
Ny Ethiopian Airlines dia mpikambana ao amin'ny Star Alliance, ny firaisam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra sy zotram-piaramanidina manana sidina matetika an'ny orinasam-piaramanidina Star Alliance afaka miangona sy mahita indray kilometatra maro amin'ireo mpitatitra rehetra ao amin'ny Alliance.
Tale jeneralin'ny vondrona Ethiopian Airlines, Andriamatoa Tewolde GebreMariam, dia naneho ny heviny: “Faly izahay mahita ny fahombiazan'ny sidina avy any Addis Ababa mankany Oslo, izay nitombo ho sidina enina isan-kerinandro. Ny zotra Oslo dia voaporofo fa fahombiazana tao anatin'ny herintaona nanombohany. Tsy ho ela dia ho tonga isan'andro izy io ary mikasa ny hanampy tolotra vaovao any Oslo avy any Asmara izahay amin'ny Desambra 2018. Manoloana ireo sidina ireo dia manolotra filàna fitomboan'ny fivezivezena eo anelanelan'i Afrika sy Eropa Avaratra izahay. Ho fanampin'ny sidina mpandeha, izahay dia nanomboka asa fanaterana mpitatitra entana tanteraka avy any Oslo mankany Guangzhou any Sina tamin'ny 11 Oktobra 2018, nanamora ny fanondranana hazan-dranomasina norvezianina nankany amin'ny tsena Aziatika. ”
'Tena nanao ny asany tao amin'ny seranam-piaramanidina Oslo ny Etiopiana hatramin'ny nanombohany tamin'ny taon-dasa, ary ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Star Alliance dia singa iray lehibe amin'ny fahazoana mpandeha fomba mahomby amin'ny dia eo anelanelan'i Norvezy sy Afrika,' hoy i Spruit.
Ankoatry ny fiaingan'ny mpandeha enina isan-kerinandro avy amin'ny seranam-piaramanidina Oslo, ny Ethiopian Airlines koa dia nanangana làlam-pitaterana entana ny alakamisy 11 oktobra niaraka tamin'ny fiainganana roa isan-kerinandro tany Guangzhou any Shina.
'Miandrandra fatratra ny fanesorana ny zotram-pitaterana vaovao hiala ny tany izahay. Handray anjara lehibe amin'ny fanondranana hazan-dranomasina norvezianina vaovao amin'ny tsena aziatika mitombo hatrany izany. Ny fiarahamiasa aminay etiopianina dia midika ho famoronana lanja norveziana, ' Tapitra ny famafazana.
Niverina indray ny sidina Ankara-Rome taorian'ny 60 taona
Birao fizahantany afrikanina: fanombohana malefaka amin'ny tsenan'ny World Travel Market